Gudoomiye ku xigeenka 2-aad ee baarlamaanka Soomaliya oo taageeray xilka qaadista afhayeenka baarlamaanka. – Radio Daljir
Gudoomiye ku xigeenka 2-aad ee baarlamaanka Soomaliya oo taageeray xilka qaadista afhayeenka baarlamaanka.
Muqdisho,Dec,21 -Gudoomiye kuxigeenka labaad ee baarlmaanka Soomaaliya Axmed Dhimbil Warsame oo maanta shir gudoominayay fadhi gacan ka hadal uu ku dhexmaray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa taageeray talaabadiia xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ay ku sheegeen inay xilkii ka qaadeen afhayeenka baarlamaanka Shariif Xasan.
Gudoomiye kuxigeenka oo ka hadlayay fadhigii baarlamaanku uu yeeshay maanta ayaa waxaa uu sheegay in markii uu dalka dib ugu soo laabtay uu si gaar ah uu u baaray talaabadii xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ay xilkii uga qaadeen afhayeen Shariif Xasan.
Waxaa uu sheegay go’aanka baarlamaanka ee xilka qaadista inuu yahay mid sax islamarkaana hab sharci ah uu u dhacay.
Gudoomiye kuxigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa sidoo kale xildhibaanada diidan Shariif Xasan waxaa uu ka gudoomay inuu u noqdo gudoomiyha kmg ee baarlmaanka,isagoona xilkaasi kala wareegay xildhibaan Madoobe Nuunow Maxamed.